Ohabolana : 8000 .. 8447
Ohabolana 8000 Valambato nitsindriam-pe : tompony zanaharin’ ny raha. [Samson 1965 #V8]
Ohabolana 8001 Valam-paria tsara hatsaka : na kely aza, mitety tora-kovitra ihany. [Cousins 1871]
Ohabolana 8002 Valavala ny hataka, tambiko ny laho ; mahavoa tsara, tsy mahavoa tsara. [Samson 1965 #V10]
Ohabolana 8003 Valavo Ampasimbola : velon’ ny fanahiny. [Samson 1965 #V65]
Ohabolana 8004 Valavo ho velona am-barangaran-davaka. [Samson 1965 #V58]
Ohabolana 8005 Valavo ho velona, anjon-davañy. [Houlder 1895]
Ohabolana 8006 Valavo lahy mitakonjevoña: feno ñy lailainy foaña. [Houlder 1895]
Ohabolana 8007 Valavo lahy nilomany riaka, velona tsisy hiravo, maty tsisy hitserika. [Samson 1965 #V62]
Ohabolana 8008 Valavo lahy tsy namian-deona : ampiana mahafotsy, tsy ampiana mahafotsy. [Samson 1965 #V60]
Ohabolana 8009 Valavo nanandran-tsira ; lah’ manindroa omban’ aty latsaka. [Samson 1965 #V57]
Ohabolana 8010 Valavo nirangotim-piso : tsy maty fa fohafoha volo. [Samson 1965 #V64]
Ohabolana 8011 Valavo nitakon-jevona : feno lainy foana. [Samson 1965 #V61]
Ohabolana 8012 Valavo nitety amandotra : tsy mbola dila ny lohany ka mikiokioka. [Samson 1965 #V63]
Ohabolana 8013 Valavo tokana tsy mikirintsana, zaza maty reny tsy minono. [Samson 1965 #V59]
Ohabolana 8014 Valim-babena. [Veyrières 1913 #1009]
Ohabolana 8015 Valim-pidinana : fiakarana. [Rinara 1974 #4846]
Ohabolana 8016 Valin' ny anana hena, valin' ny hena anana. [Veyrières 1913 #894]
Ohabolana 8017 Valin’ ny fiakarana fandroronana. [Samson 1965 #V12]
Ohabolana 8018 Valin' ny noana ny voky. [Rinara 1974 #4847]
Ohabolana 8019 Valin-tsongo, ronono. [Samson 1965 #V11]
Ohabolana 8020 Valo ila ny olombelona. [Samson 1965 #V67]
Ohabolana 8021 Valom-baratra. [Veyrières 1913 #6444]
Ohabolana 8022 Valo mikodiadia : tsy mitsahatra tsy an-kandemponana. [Nicol 1935 #463]
Ohabolana 8023 Vangan-tsy efa tsy mahatapa-poitra. [Samson 1965 #V13]
Ohabolana 8024 Vangavanga manana endrika, sadasada manantsoratra. [Houlder 1895 #1303, Cousins 1871 #3605, Rajemisa 1985]
Ohabolana 8025 Vangàna amin’ angatra, takalo amin’ amonoka ny an-tanan-dasana, ny diasana tsy azo. [Samson 1965 #V15]
Ohabolana 8026 Vangàna amin--trova : izay tia resy. [Samson 1965 #V14]
Ohabolana 8027 Vanja hamatra : tsy ariako amin-toloho. [Samson 1965 #V20]
Ohabolana 8028 Vanja may tsy harena. [Samson 1965 #V19, Cousins 1871 #3606]
Ohabolana 8029 Vanja nafahan-tafondro, ka maty am--pon' ny ngetroka (setroka). [Houlder 1895 #2210]
Ohabolana 8030 Vanjankohom-piso : mamory ny marangitra. [Samson 1965 #V17]
Ohabolana 8031 Vanjankohon-toloho : lava tsy maneka. [Samson 1965 #V18]
Ohabolana 8032 Vanja sy afo : raha mihaona mamohehatra. [Rinara 1974 #4852]
Ohabolana 8033 Vantotr' akoho eo an-tanan-tompony, sy vorombazaha raisina amin' ny tendany, ka samia mahazaka ny anjarany. [Veyrières 1913 #2757]
Ohabolana 8034 Vantotr' akoho manatody : ela niribaribana ka hikotrika ; kanjo tsy hikotrika indray, fa hanjahana. [Veyrières 1913 #5942, Cousins 1871 #3609, Rinara 1974]
Ohabolana 8035 Vantotr' akoho no ananana, ka ny hanati-bodiondry no saintsainina. [Rinara 1974 #4855]
Ohabolana 8036 Vantotr' akoho nofaohin-tsintsina, ka sady gaga no talanjona. [Rinara 1974 #4855]
Ohabolana 8037 Vantotr' omby minono : tsy homan-doza fa mahatsiahy ny ela. [Rinara 1974 #4856]
Ohabolana 8038 Vao manary lamba hoatry ny fary. [Veyrières 1913 #2124]
Ohabolana 8039 Vao misafo helika ny kary. [Veyrières 1913 #6613]
Ohabolana 8040 Vao misafo maso. [Veyrières 1913 #6614]
Ohabolana 8041 Varandrin-drano ny fanahy : tsy ialan’ ny mitete. [Samson 1965 #V24]
Ohabolana 8042 Varangaran-tsihy : miainga atsy, mody, miainga ary, mody. [Samson 1965 #V25]
Ohabolana 8043 Varatra tsy indroa miriatra. [Cousins 1871 #3613, Nicol 1935 #298]
Ohabolana 8044 Varavañan-Jañahare tsy re mikapaike. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8045 Varavaran-kazo anjaran' ny velona ary ny varavaram-bato anjaran' ny maty. [Rinara 1974 #4859]
Ohabolana 8046 Vary amim-balala: tsakoina, madinika ; atelina, be faikany. [Rinara 1974 #4871, Cousins 1871 #3614]
Ohabolana 8047 Vary amin' anana. [Veyrières 1913 #6158]
Ohabolana 8048 Vary an-tsihy lava : tsy maina aby, tsy toro aby. [Samson 1965 #V21]
Ohabolana 8049 Vary be vato, ka tsy ahateleman-koatrinona. [Cousins 1871 #3616]
Ohabolana 8050 Varidimiventy namidy takotra, ka varo-maty mandrakizay. [Rinara 1974 #4860]
Ohabolana 8051 Varidimiventy namidy trafonokena. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8052 Varifitoventy mahatapaka ny vozon' akoho. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8053 Varifitoventy namidy ringitra : ny an' ny tena ihany ka mampizihitra. [Veyrières 1913]
Ohabolana 8054 Varifitoventy zato no tonga ariary. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8055 Varifotsy nihilana an-dalambe : zovy mahita ny tiany tsy ho ravo ? [Samson 1965 #V26]
Ohabolana 8056 Vary indroan’ ny fatambary : ny iray ialemana, ary ny iray isakafoana. [Cousins 1871 #3617]
Ohabolana 8057 Vary iray no nafafy, ka vary zato no miakatra. [Houlder 1895 #665]
Ohabolana 8058 Varika may : raha mipatriaka fa tsy ravo. [Samson 1965 #V27]
Ohabolana 8059 Vary lelik’antsanga: voaterisetra havozona, ka tsy misy hiolanolanana. [Cousins 1871 #3619]
Ohabolana 8060 Vary lena ka tsaikatsaikao, havan' ory tsy mba firiatra. [Rinara 1974 #4877]
Ohabolana 8061 Vary lena voatoto: ka samy te-ho lohany. [Houlder 1895 #647]
Ohabolana 8062 Vary mangatsiaka. [Veyrières 1913 #3777]
Ohabolana 8063 Vary maniry an-davabary, ka mitaroka anatin' ny maizina. [Houlder 1895 #2196, Rinara 1974 #314]
Ohabolana 8064 Vary manta jinjaina : tsy manampo izay ho faty, fa ny manao no mahery. [Veyrières 1913 #800]
Ohabolana 8065 Varim--boamena : lany omban-drano. [Samson 1965 #V23]
Ohabolana 8066 Variraiventy isan' olo-miaina. [Veyrières 1913 #404]
Ohabolana 8067 Vary raraka. [Veyrières 1913 #3626]
Ohabolana 8068 Vary ratsy : mpamono reny, reny jejo : mambotry anaka. [Rinara 1974 #4880]
Ohabolana 8069 Vary sosoa nilaofan-kitoza, ka tsy soa fa mifanentana. [Rinara 1974]
Ohabolana 8070 Varivarian' ny lavitra, ka manary ny efa nihary. [Veyrières 1913 #1355]
Ohabolana 8071 Varivarian’ ny lavitra, ka tsy mahita ny ambany maso. [Cousins 1871 #3627, Nicol 1935 #497]
Ohabolana 8072 Vary vokatra eo Ibetsimitatatra : na tompony na tsy tompony, samy mitazana. [Rinara 1974]
Ohabolana 8073 Vari-vory amin' abatoraka : totoina tsy miray fotsy, ahandroin-tsy miray masaka. [Rinara 1974]
Ohabolana 8074 Vary zato naharon' ny sompitra. [Rajemisa 1985 #32]
Ohabolana 8075 Vary zava : tsy manahy. [Samson 1965 #V22]
Ohabolana 8076 Varo--bomanga-dRenisoa : enti-mihazakazaka poritra, enti-miadana tsy mahatratra tsena. [Rinara 1974]
Ohabolana 8077 Varo--bomanga-dRenitsiambizo : mafana tsy lafo venty, ka masiso vao iraimbilanja. [Rinara 1974]
Ohabolana 8078 Varotra amin-dRenidona, ka sady vola no vary. [Rinara 1974 #4867]
Ohabolana 8079 Varotra amponga an-tanàna, ka sady mahare ny feony no mahalany ny vidiny. [Rinara 1974 #4868]
Ohabolana 8080 Varotra tsy raikitra tsy maharatsy fihavanana. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8081 Varotr' Imampiadana : ho eo ihany ka ilaozany misiona. [Rinara 1974 #4869, Cousins 1871]
Ohabolana 8082 Varo-tsy mifody. [Veyrières 1913 #2934]
Ohabolana 8083 Vata feno tsy indao mananika. [Samson 1965 #V28]
Ohabolana 8084 Vatan' oron-dambo, mitrongy vao homana. [Houlder 1895 #718, Veyrières 1913 #3778]
Ohabolana 8085 Vato ambany riana : tsy mikorontana fa mifanamboa-toerana. [Houlder 1895 #2199, Rinara 1974 #4886]
Ohabolana 8086 Vato an-dava--drano: tsy miady, fa mifanajary toerana. [Cousins 1871 #3634]
Ohabolana 8087 Vato ateli-mamba. [Veyrières 1913 #3186]
Ohabolana 8088 Vato atora-pody, ka tsy hatahorany izay vary hiraraka. [Veyrières 1913 #3424]
Ohabolana 8089 Vatobe nilaozan’ ny rano : jerijery lava. [Samson 1965 #V33]
Ohabolana 8090 Vatobe tsy misy tohany, ka any an-dohasaha no iafarany. [Rinara 1974 #4889]
Ohabolana 8091 Vato daholo moa, ka hataoko ahoana ? [Veyrières 1913 #3779]
Ohabolana 8092 Vato famono lolo. [Veyrières 1913 #3425]
Ohabolana 8093 Vato handratra tsy mivongovongo, voay hamono tsy mandoto rano. [Samson 1965 #V30]
Ohabolana 8094 Vatolampy aman-tany. [Veyrières 1913 #267]
Ohabolana 8095 Vatolampy nanasan-dandy : ny lavenona lasan' ny rano ary ny landy lasan' ny tompony, fa ny vato no sisa tratra eo. [Rinara 1974 #4891]
Ohabolana 8096 Vato levombo : be ny rano eo, haka ny rano eo. [Samson 1965 #V36]
Ohabolana 8097 Vato masina isehoan' ny andriana. [Veyrières 1913 #268]
Ohabolana 8098 Vato maty sy ody tsy masina : mandrenesa, ry samy ratsy. [Veyrières 1913 #142, Rinara 1974 #5052, Cousins 1871]
Ohabolana 8099 Vato mifono raty : mamitaka ny mpanan’ antsy. [Samson 1965 #V32]
Ohabolana 8100 Vato namelan-kafatra. [Veyrières 1913 #3187]
Ohabolana 8101 Vato nanasan-damba : niala maina. [Samson 1965 #V34]
Ohabolana 8102 Vato natora-jatovo lohataona aho, ka voin-tenanao ta-hanary ahy: fa raha tsy hitan' ny mpihosy raha manetsa aza, tsy ho hitan' ny mpijinja raha fararano? [Houlder 1895 #2308]
Ohabolana 8103 Vato natora-mamba, ny natoraka nilentika, ny notorahana nilentika koa. [Rinara 1974 #317]
Ohabolana 8104 Vato navalavala fody : tsy manahy vary ho raraka. [Samson 1965 #V35]
Ohabolana 8105 Vato navalavala voay, ny nivalavalana tsy niboana, ny navalavala nihitsoka. [Samson 1965 #V29]
Ohabolana 8106 Vato nohonkonam-by, tian-ko mafy indrindra. [Cousins 1871 #3638]
Ohabolana 8107 Vato no notadiavina, ka toko no hita. [Cousins 1871 #3639]
Ohabolana 8108 Vatsy sakaizan' ny lalana, angady sakaizan' ny asa. [Rinara 1974]
Ohabolana 8109 Vatsy tsy miohatra ny marina, soa tsy miohatra ny vola. [Rinara 1974]
Ohabolana 8110 Vava aman-kavana ka ny mahefa be no manenina. [Rinara 1974 #4898]
Ohabolana 8111 Vava diso tsy mba kabary, fa ny homana aza misy latsaka. [Rinara 1974 #4900]
Ohabolana 8112 Vavahady mizaha vary vokatra. [Veyrières 1913 #695]
Ohabolana 8113 Vavahady no soa maro miditra, fantsakana no soa maro maka, fa ny lalam-bady tsy roa maro manana. [Rinara 1974]
Ohabolana 8114 Vava kisoa misy sira: ka tokinao hihinana azy. [Houlder 1895 #904]
Ohabolana 8115 Vavan’ alika feno taolana : tsy hanina hahavoky, fa henamaso ny be. [Cousins 1871 #3645]
Ohabolana 8116 Vavany maro ohatra ny sodina. [Rinara 1974]
Ohabolana 8117 Vavan’ ny mpindran-dakana. [Samson 1965 #V37]
Ohabolana 8118 Vava tsy ambina : amoizan' olon-tiana. [Rinara 1974 #4906]
Ohabolana 8119 Vava tsy ivonian’ ny soroka. [Samson 1965 #V39]
Ohabolana 8120 Vavy anti-doza, ka tsy mamindra fo ny lasa. [Veyrières 1913 #1938]
Ohabolana 8121 Vavy antitra maka kitay : midina, manahy ny tsy hahazo; miakatra, manahy ny tsy hahazaka. [Cousins 1871 #3647]
Ohabolana 8122 Vavy antitr’ Imamo: atao aloha, tsy mahatari-dalana ; atao aoriana, tsy mahafehy trano. [Veyrières 1913 #1940, Cousins 1871 #3650, Rinara 1974]
Ohabolana 8123 Vavy antitr' Imerina : andrasan-kanjoko vao mitera-dahy. [Veyrières 1913 #1941, Rinara 1974 #318, Cousins 1871 #3651]
Ohabolana 8124 Vavolombelon' ny maty ny maimbo. [Veyrières 1913 #2935, Rinara 1974 #4907, Cousins 1871 #3652]
Ohabolana 8125 Vavolombelon’ ny mpiasa ny bainga. [Nicol 1935 #400]
Ohabolana 8126 Vazaha diso mofo. [Veyrières 1913 #5273]
Ohabolana 8127 Vazaha diso namana. [Veyrières 1913 #1747]
Ohabolana 8128 Vazaha nametra, Hova anim-pia. [Samson 1965 #V40]
Ohabolana 8129 Vazaha nandrava : tsy fotaka ny dia. [Samson 1965 #V41]
Ohabolana 8130 Vazaha tody a Vondrona. [Samson 1965 #V42]
Ohabolana 8131 Vazaha vaky sambo. [Veyrières 1913 #2574]
Ohabolana 8132 Vazimbalahy anaty roimemy : fofoin-ko faty vao ela velona. [Rinara 1974 #4915]
Ohabolana 8133 Vehivavy tsara tarehy petaka orona : voantondro iray monja no tsininy. [Veyrières 1913 #1794, Cousins 1871 #3656]
Ohabolana 8134 Vehivavy tsy fanao hianao. [Veyrières 1913 #3089]
Ohabolana 8135 Vehivavy tsy lany keninkenina, lehilahy tsy lany adidy. [Rinara 1974 #4918]
Ohabolana 8136 Vehivavy tsy mahafaty lambo : amalo-masaka tsy afa-mandeha. [Veyrières 1913 #1795, Rinara 1974 #4919, Cousins 1871 #3657]
Ohabolana 8137 Vely ampongan' Ikidobo, ka ny kitsantsony no maneno alohan' ny kidobony. [Houlder 1895 #2300]
Ohabolana 8138 Vely amponga no tsy ory sahala, voro-dambamena no samy manana. [Rinara 1974 #4925]
Ohabolana 8139 Vely bingin-dRatentena : anambo tsy ren--Janahary, ambony tany tsy ren' olombelona. [Samson 1965 #V47]
Ohabolana 8140 Veliranom--Bazimba, ka izay mamadika aloha ihany no kely ila. [Veyrières 1913 #120]
Ohabolana 8141 Veliranom-borombazaha, ka izay mamadika aloha fisa-bava. [Veyrières 1913 #4226, Houlder 1895]
Ohabolana 8142 Vely zompona ; hatony havenina. [Samson 1965]
Ohabolana 8143 Veloma amin-janaka, misy hiafarana, veloma amim-bady, misy ianteherana. [Rinara 1974 #4920]
Ohabolana 8144 Veloma fo aman' aina. [Veyrières 1913 #4178]
Ohabolana 8145 Veloma ry Ikaky sy Ineny, fa sinibe manga roa hianareo, ka tsy misy tombo sy hala. [Rinara 1974 #4921, Cousins 1871 #3658]
Ohabolana 8146 Veloma, ry sakaiza, tsy ho voan' ny an-tanan-tena anie, tsy haratra ny an-tanan' olona. [Veyrières 1913 #4179]
Ohabolana 8147 Veloma ry taona, fa lasa tsy hiverina intsony. [Veyrières 1913 #4180]
Ohabolana 8148 Veloma, soava tsara. [Veyrières 1913 #4181]
Ohabolana 8149 "Veloma, soava tsara" , tsy mahavelom-bady aman-janaka. [Cousins 1871 #3659, Houlder 1895]
Ohabolana 8150 "Veloma" tsy mba adidy: sakafo lany tsy mba andraikitra. [Houlder 1895 #146]
Ohabolana 8151 Velona ady. [Veyrières 1913 #3379]
Ohabolana 8152 Velona amboa. [Veyrières 1913 #176]
Ohabolana 8153 Velona iray trano, maty iray fasana. [Rinara 1974 #4924]
Ohabolana 8154 Velona narary tsy nahalany katiso, ka maty vao mahalany be. [Veyrières 1913 #2936]
Ohabolana 8155 Velona tsy tiana, ka maty vao Ratompokolahy. [Veyrières 1913 #2937]
Ohabolana 8156 Velon--dray tsy manjaka ny zaza. [Veyrières 1913 #895]
Ohabolana 8157 Velon-taho. [Veyrières 1913 #1010]
Ohabolana 8158 Venty no ananana, ka ny kirobo telon' ny olona no tsy ahaiza-miaina. [Rinara 1974 #4932]
Ohabolana 8159 Vereza faty. [Veyrières 1913 #4227]
Ohabolana 8160 Vereza ny ho very, matesa ny ho faty ! [Veyrières 1913 #4228]
Ohabolana 8161 Very amaso karaha vazana. [Samson 1965 #V46]
Ohabolana 8162 Very anevanevany hoatry ny zazahova. [Veyrières 1913 #604]
Ohabolana 8163 Very an-tanàna, adidin' ny vohitra, ka vorio ny fokonolona. [Veyrières 1913]
Ohabolana 8164 Very an-trano, adidin' ny trano, very an-tanàna, adidin' ny tanàna. [Rinara 1974 #4936, Houlder 1895]
Ohabolana 8165 Very an-trano hoatry ny fanjaitra. [Veyrières 1913 #3323]
Ohabolana 8166 Very famoriana, toy ny maty vady reni-anaka. [Veyrières 1913 #6532, Rinara 1974 #4939, Cousins 1871 #3665]
Ohabolana 8167 Very fanahy mangatsia-kevitra, toy ny bevohoka nisaoram-bady. [Rinara 1974 #4938]
Ohabolana 8168 Very faty. [Veyrières 1913 #2938]
Ohabolana 8169 Very fihantana toy ny maty ray aman-dreny. [Veyrières 1913 #829, Rinara 1974 #4940, Cousins 1871 #3666]
Ohabolana 8170 Very hasina. [Veyrières 1913 #3090]
Ohabolana 8171 Very indroa ohatra ny tain-kisoa. [Rinara 1974]
Ohabolana 8172 Very Ivoara fa tondraka Ivarahina. [Veyrières 1913 #3161, Cousins 1871 #3667]
Ohabolana 8173 Verin-tenany ohatra ny ampingan' ilay osa. [Cousins 1871, Rinara 1974]
Ohabolana 8174 Very sasaka ohatra ny fihinam-barim-boka. [Rinara 1974]
Ohabolana 8175 Very sasaka, ohatra ny fotsimbary anaty haron-kerana. [Cousins 1871, Rinara 1974]
Ohabolana 8176 Very sasaka, very fahatelo, ohatra ny ro sotroin' ny sima. [Cousins 1871, Rinara 1974]
Ohabolana 8177 Very vahatry ny aina, tahaka ny maty zanaka lahi-matoa. [Rinara 1974 #4947]
Ohabolana 8178 Very zava-tsy hay. [Veyrières 1913 #61]
Ohabolana 8179 Vero may. [Veyrières 1913 #466]
Ohabolana 8180 Vero notaingenam-pody : tsy folaka fa milefitra. [Rinara 1974 #4934]
Ohabolana 8181 Vezo ka renjeke, Mikea ka tsobo. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8182 Viavy fandambanana : fohaza fa hihinana. [Samson 1965 #V51]
Ohabolana 8183 Viavy hadirano : miakatra tsy amin’ entana. [Samson 1965 #V49]
Ohabolana 8184 Viavy ranjaly, sakafon' a mpilanja. [Samson 1965 #V48]
Ohabolana 8185 Viavy razan’ antsy : fandriandrian-dava. [Samson 1965 #V52]
Ohabolana 8186 Viavy voan’ angivy : fangalàna ny zanahy. [Samson 1965 #V50]
Ohabolana 8187 Vidian-tsy azo, ka alai-mora foana. [Rinara 1974 #4948]
Ohabolana 8188 Vidin-doha. [Veyrières 1913 #3380]
Ohabolana 8189 Vidin-kaja, vidim-boninahitra. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8190 Vidy ombalahin-dRazakandrianaina: tsy mividy ny mahavoa, fa ny mahay miala. [Houlder 1895]
Ohabolana 8191 Vikina, ka samy manao izay afany. [Houlder 1895 #1225, Veyrières 1913 #3823]
Ohabolana 8192 Vikin--tsahona, ka samy manala izay ho afany. [Veyrières 1913 #1596]
Ohabolana 8193 Vilahin-doso, sady tsy mahatevy ala no tsy mahadinika kitaina. [Houlder 1895]
Ohabolana 8194 Vilanibe nahandroan-kena, ka tsy ilaozan' izay motimotiny ho diso. [Rinara 1974 #4947]
Ohabolana 8195 Vilanibe nanantoana : na vaky sy torotoro aza, tsy arian-davitra loatra fa namela soa. [Rinara 1974 #4946]
Ohabolana 8196 Vilaniborin’ Amboatany : ariana, tsy foy; avela, manebaka ny trano. [Veyrières 1913 #5837, Cousins 1871 #3677, Houlder 1895, Rinara 1974]
Ohabolana 8197 Vilany misarona toa hisy hena ihany. [Rinara 1974 #4949]
Ohabolana 8198 Vilanin’ Inkarenina : vaky vao hita. [Samson 1965 #V54]
Ohabolana 8199 Vilany tsy feno mahalava tenda. [Veyrières 1913 #5882, Cousins 1871 #3674]
Ohabolana 8200 Vilany vakin--dRainibeboka: ifonana, tsy azo; avela vita ihany. [Houlder 1895]
Ohabolana 8201 Vilany vy Ambohimanga : izay alainy dia masaka daholo. [Veyrières 1913 #2261]
Ohabolana 8202 Vilany vy natrao-Bazaha : teto lah’ niharo. [Samson 1965 #V55]
Ohabolana 8203 Vilian-Jafimamy : sady tongony no lelany. [Rinara 1974 #4951]
Ohabolana 8204 Vilia tanimanga : na mangiloilo aza tsy fampiseho vahiny. [Rinara 1974 #4952]
Ohabolana 8205 Vy nahitana sy fangady nananana. [Veyrières 1913 #1485]
Ohabolana 8206 Vy nanañana, angady nahita. [Beaujard 1998]
Ohabolana 8207 Vinanto misorom-pihavanana rafozana, mividy hena matavy, manasa rafozana noho ny tany tsy lavitra, fa trano mifanolo-body rindrina. [Veyrières 1913 #1482]
Ohabolana 8208 Vinanto nahazo rafoza. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8209 Vinanto norosoana fanam--bomanga, ka mahatsiaro ny adidy tsy vitany. [Rinara 1974 #4953]
Ohabolana 8210 Vinanto saro-kenatra : asaina, tsy avy; avela, mangala-pihinana. [Veyrières 1913 #1483, Cousins 1871 #3679]
Ohabolana 8211 Vinanto tsy manam--bary maina : tsy vinanto fa vy nahantona. [Veyrières 1913 #1484, Rinara 1974 #4955, Cousins 1871 #3680]
Ohabolana 8212 Vintan' andriana ireny angaha, ka Alahamady? [Veyrières 1913 #121]
Ohabolana 8213 Vintan-tefy : ny jobo no lasa aloha. [Veyrières 1913 #3628, Cousins 1871 #3681]
Ohabolana 8214 Vita kabary. [Veyrières 1913 #3629]
Ohabolana 8215 Vita ny adinao, naharesy hianao. [Veyrières 1913 #3381]
Ohabolana 8216 Vita ratsy karaha Zanahary nanano voay. [Samson 1965 #V56]
Ohabolana 8217 Vita ty amiñiñe, hoy ty nandeve rafoza halañe. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8218 Vitsika mitondra valala, ka madilana kibo hasiana, fa ny deraderany no tsy toha. [Houlder 1895 #1349]
Ohabolana 8219 Vitsika momba kitay : harivariva any an-tanin' olona. [Veyrières 1913 #4036]
Ohabolana 8220 Vitsika nahazo valala: tonga ny entana, fa ny vava no tsy omby. [Houlder 1895 #637]
Ohabolana 8221 Vitsika nanara-kitay aho. [Veyrières 1913 #1044]
Ohabolana 8222 Vitsy mpanao Ineny toa momba. [Rinara 1974 #4959]
Ohabolana 8223 Voafitaky ny vavany, ohatra ny tobo voajono. [Cousins 1871]
Ohabolana 8224 Voahangy mifidy andriana. [Veyrières 1913 #269]
Ohabolana 8225 Voahangy mitoha-bolamena : raha raisaraka, tsy ampy ho rado. [Cousins 1871 #3687]
Ohabolana 8226 Voahangy raraka, ka manao soa ny eo am--potony. [Houlder 1895 #745]
Ohabolana 8227 Voahangy raraka ka ombay mitsimpona, ombay mieritreritra. [Rinara 1974 #321]
Ohabolana 8228 Voahangy tsara vaventy fihaingoa-mahafa-kenatra. [Veyrières 1913 #2476, Rinara 1974 #4965, Cousins 1871 #3689]
Ohabolana 8229 Voahangy tsy arahin-katina. [Veyrières 1913 #2983]
Ohabolana 8230 Voay a Maintinandry : tsy malaka ny madinika. [Samson 1965 #V77]
Ohabolana 8231 Voay lahy tsy miara-lovoka (rano lalina). [Houlder 1895]
Ohabolana 8232 Voay latsa-dremby : mitrena izay nahasampona. [Rinara 1974 #5004]
Ohabolana 8233 Voay mahita antsantsa : manano mody maty. [Samson 1965 #V76]
Ohabolana 8234 Voay nivalana : tsisy hanakana. [Samson 1965 #V74]
Ohabolana 8235 Voaira izy, hoy Ibango nangala-poly. [Rinara 1974 #4966, Cousins 1871 #3690]
Ohabolana 8236 Voalatsa-bato tsy hinona, ka misaron-doha mandeha. [Veyrières 1913 #177, Rinara 1974 #4983, Cousins 1871 #3702]
Ohabolana 8237 Voalavobe latsaka am--bilanibe : ny kiry be ihany, fa ny lalan-kaleha no tsy misy. [Veyrières 1913 #6392, Cousins 1871]
Ohabolana 8238 Voalavolahy mikiky vy : tsy nahazo na hatao ody lolo aza. [Veyrières 1913 #4332, Rinara 1974 #4967, Cousins 1871 #3699]
Ohabolana 8239 Voalavolahy mila loza, ka miditra an-trano misy saka. [Rinara 1974 #4968]
Ohabolana 8240 Voalavo latsaka am--bilanibe ka tsy afa-miala. [Houlder 1895 #1023, Veyrières 1913 #5517]
Ohabolana 8241 Voalavo latsaka am--bilanibe : ny hasemporana tsy misy fa ny fialana no mahafoy fisainana. [Rinara 1974 #4969]
Ohabolana 8242 Voalavo latsaka an-kentona, ka ny halavoana leo ihany, fa ny akoralavan' ny olona no tsy toha ; hitraka moa tsy avelan' ny henatra ; hiondrika, tsy avelan' ny voninahitra. [Veyrières 1913 #6053]
Ohabolana 8243 Voalavo manaiki--by, ka ny tsy laitra hanina no hanihaniny. [Veyrières 1913 #2125]
Ohabolana 8244 Voalavo mandositra andro : mahin' ny fanahy ratsy natao alina. [Rinara 1974 #4971]
Ohabolana 8245 Voalavo mihazakazaka alina : tsy ny lalana no mahamaika, fa ny fanahy ratsy atao andro lava no mahamaody. [Veyrières 1913 #4333, Cousins 1871 #3692]
Ohabolana 8246 Voalavo mihazakazaka an-kentona: tsimbino ny aina, fa lavitra hianjerana. [Veyrières 1913 #6262, Cousins 1871 #3693]
Ohabolana 8247 Voalavo mitety vazan-trano misy saka, ka fohy andro andehanana. [Houlder 1895 #873, Veyrières 1913 #6334, Rinara 1974 #4975]
Ohabolana 8248 Voalavo mitsaba--dronono, ny kibo tsy voky, fa ny rambo no lena. [Rinara 1974 #4976, Cousins 1871 #3694]
Ohabolana 8249 Voaloboka ka tsy soa mandady amim-bovoka. [Rinara 1974 #4984]
Ohabolana 8250 Voalongoza lanim-panaloka : tsara manam-boho. [Samson 1965 #V72]
Ohabolana 8251 Voamaho ny olombelona : lah’ tsy tohinina tsy manitra. [Samson 1965 #V73]
Ohabolana 8252 Voamaintilany : misaraka tsy ho aiza. [Veyrières 1913 #5349]
Ohabolana 8253 Voamena maninana ny venty, ka mahandrasa fa vao am-pahefany. [Rinara 1974 #4985]
Ohabolana 8254 Voa mirindra, voa miandalana, ka izay mahatsangy no zaza. [Houlder 1895 #1923, Veyrières 1913 #1011]
Ohabolana 8255 Voa nahantona, voa naraviravy, izay ipetrahan’ ny aloha no ipetraban’ ny aoriana. [Cousins 1871 #3685]
Ohabolana 8256 Voan’ angivy ny olombelona : tsy miarak’ antitra. [Samson 1965 #V71]
Ohabolana 8257 Voanantay, voanantay : ka ataovy be mba hilana. [Veyrières 1913 #3165, Houlder 1895]
Ohabolana 8258 Voangaly angaha aho no ho faty an-kazotokana ? [Veyrières 1913 #1249]
Ohabolana 8259 Voangin' i Marosika : hangahangany foana. [Samson 1965 #V69]
Ohabolana 8260 Voangin’ ny marary : sady tsy hanina tsy amiana olona. [Samson 1965 #V70]
Ohabolana 8261 Voangory voafatotr' ankizy : manidina ihany fa eny ho eny. [Veyrières 1913 #1545, Rinara 1974 #4989, Cousins 1871]
Ohabolana 8262 Voanjo natoraka an-tsihivitrana, ka ny manahy no mahita izay nikatrahany. [Veyrières 1913 #5883]
Ohabolana 8263 Voan-kanina fony fahavaratra aho : raha mitsinjo rano fotsy mihetsika. [Rinara 1974 #4992, Cousins 1871 #3707]
Ohabolana 8264 Voantango no nambolena, ka voanketsihetsy no naniry. [Veyrières 1913 #3781, Rinara 1974 #324, Cousins 1871]
Ohabolana 8265 Voantsikalabàna : ny manta niraraka, ny masaka nihantona. [Samson 1965 #V80]
Ohabolana 8266 Voantsira taitra, lambo rava : aza fanarakaraka fa samy ratsy. [Samson 1965 #V78]
Ohabolana 8267 Voantsiroko nisangorina antoandro : tsy narian’ olona fa nanary tena. [Samson 1965 #V79]
Ohabolana 8268 Voasary amoron-dalana : haka aho tsy tompony, hitoetra ihany maha-te-hihinana. [Veyrières 1913 #5838, Cousins 1871, Rinara 1974]
Ohabolana 8269 Voatamenaka nohanim-boalavo, ka ratsy vava indray alina ihany. [Rinara 1974 #5000]
Ohabolana 8270 Voatavo an-doha voanjo : manan-doha fa tsy manam-bava. [Veyrières 1913 #3630, Rinara 1974 #4996, Cousins 1871 #3710]
Ohabolana 8271 Voatavo an-doha voanjo : volavolain-tsy maroroka. [Veyrières 1913 #3782, Rinara 1974 #4997, Cousins 1871 #3711]
Ohabolana 8272 Voatavo be ravina, fa poa-taho. [Veyrières 1913 #6054]
Ohabolana 8273 Voatavo mahamay ka tsy hanin-jaza sarotra an-kanina. [Rinara 1974 #4999]
Ohabolana 8274 Voatavo tsy mifandraka : ny loha ananana, fa ny vava hamely tsy misy. [Veyrières 1913 #1546, Cousins 1871 #3713]
Ohabolana 8275 Voatelina tsy satry, hoatry ny tavin-kena am-bavan' antitra. [Veyrières 1913 #1870]
Ohabolana 8276 Voatsiroroka nosangorin' ny andro : ka tsy nariako, fa nanary tena. [Rinara 1974 #5002]
Ohabolana 8277 Vodibe lavo an-drano : raha fahavoa anazy. [Samson 1965 #V83]
Ohabolana 8278 Vody fahitra ka mahita ny tena atiny. [Rinara 1974 #5007]
Ohabolana 8279 Vodihena tsy vaky tsy an-dapa. [Veyrières 1913 #313]
Ohabolana 8280 Vody varin’ Andriamanitra ny olona : izay tiany halaina no alainy, ary izay tiany havela no avelany. [Cousins 1871 #3718, Veyrières 1913]
Ohabolana 8281 Vody voam-pelatanana. [Veyrières 1913 #6702]
Ohabolana 8282 Vodivodiana ahitra an-tavin’ olona. [Samson 1965 #V82]
Ohabolana 8283 Vodivodian-tsy manaraka : an-drano mandany ny azo. [Samson 1965 #V81]
Ohabolana 8284 Vodivona no mietsaka, antsanga indray no anontaniana. [Veyrières 1913 #485, Cousins 1871 #3719]
Ohabolana 8285 Vohitra tototr' antsanga, afaky ny kary. [Veyrières 1913 #4333, Rinara 1974 #5008, Cousins 1871 #3720]
Ohabolana 8286 Vohoka tsy afehy fototra. [Samson 1965 #V84]
Ohabolana 8287 Voin-kava mahatratra, ny aretin-tsy lazaina mahafaka adidy. [Rinara 1974 #5009]
Ohabolana 8288 Voin-tenanao tsy namangy, fa ny aretiko sitran-tsy miody. [Rinara 1974 #5010, Cousins 1871 #3721]
Ohabolana 8289 Voin-tenanao tsy nanampy, fa ny adiko vita tsy nifandaharana. [Veyrières 1913 #4072, Rinara 1974 #5011, Cousins 1871 #3722]
Ohabolana 8290 Voin-tenan’ izay tsy mandrahona, fa tsy ho tonga am-body rova tsy akory. [Veyrières 1913 #6, Rinara 1974 #5012, Cousins 1871 #3723]
Ohabolana 8291 Voky tsy homana. [Veyrières 1913 #4073]
Ohabolana 8292 Volam-Bazaha tsy azo mandriandry. [Samson 1965 #V88]
Ohabolana 8293 Volamena latsaka ambovoka, tsy avela ny soa tsy hamiratra. [Beaujard 1998]
Ohabolana 8294 Volana hatenda. [Veyrières 1913 #4848]
Ohabolana 8295 Volana mahery. [Veyrières 1913 #122]
Ohabolana 8296 Volan-kankafotra ka ny omaly tsy miova ihany. [Rinara 1974 #5015]
Ohabolana 8297 Volavavy. [Veyrières 1913 #6638]
Ohabolana 8298 Voly vita kiady ka sarotra atao hitsin-dalana. [Rinara 1974]
Ohabolana 8299 Voli-voanjon--dRakaretsaka : ny any ny tena tsy vita, ka ny an’ olona no karetsahina sosohana. [Cousins 1871 #3725]
Ohabolana 8300 Vololon-drafia : maty anivon' ny maro. [Samson 1965 #V94]
Ohabolana 8301 Volo maitso nindaon-drano : samy maitso mifamadikadika. [Samson 1965]
Ohabolana 8302 Volom-bava maika hihinana, ka tsy mahandry ny asian-tsira. [Cousins 1871 #3727]
Ohabolana 8303 Volombavan' antitra : hariva vao menafify. [Rinara 1974 #5020]
Ohabolana 8304 Volombodim-bitro : tsy manam--piankoana. [Samson 1965 #V86]
Ohabolana 8305 Volom-bodin' akoho folaka : ny vava no manitsy. [Veyrières 1913 #4849, Cousins 1871 #3728]
Ohabolana 8306 Volom-bodin’ akoholahy : izay ihoronan’ ny inaro mba hihoronana. [Cousins 1871 #3729]
Ohabolana 8307 Volombodin-tritrio : samy manapakapaka ny anjony. [Samson 1965 #V90]
Ohabolana 8308 Volon' amalona. [Veyrières 1913 #6807]
Ohabolana 8309 Volon-dambo tsy in-droa hita. [Samson 1965 #V91]
Ohabolana 8310 Volon-katsaka misakan-tadio, ka manohana ny tsy eran' ny ainy. [Houlder 1895 #910]
Ohabolana 8311 Volon' omby mainty. [Veyrières 1913 #6810]
Ohabolana 8312 Volon’ orona ny harena : be alàna, maharary; kely alàna maharary. [Samson 1965]
Ohabolana 8313 Volon-tany arahin' ovy, tanety ambo arahin--javona. [Samson 1965 #V85]
Ohabolana 8314 Volon-tany samihafa. [Veyrières 1913 #344]
Ohabolana 8315 Volo vaky : lelany aby. [Samson 1965 #V92]
Ohabolana 8316 Vomanga an-kady: amidy vola tsy lafo, atakalo vary tsy foy. [Houlder 1895 #640]
Ohabolana 8317 Vomanga mafy ka an-tanty no manary azy. [Houlder 1895 #2190, Cousins 1871]
Ohabolana 8318 Vomanga meloka: any an-tenda manitsy azy. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8319 Vomanga miotrika ampombo : na mba tsara ihany fa fotsy ratsy. [Veyrières 1913 #2267]
Ohabolana 8320 Vomangan-dRenisoa : teny an-dalana maro mpanontany, nodiany tsy re, fa nony natoko teny an-tsena, tsy lany sasaka. [Rinara 1974]
Ohabolana 8321 Voninahitra an-tsobiky tsy atao am-patambary. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8322 Voninahitra omena ny akondro, fa ny vomanga mba mamy ihany. [Cousins 1871]
Ohabolana 8323 Voninkazo manitra anaty ahitra : hosihosena vao mamerovero. [Cousins 1871 #3736, Nicol 1935 #438]
Ohabolana 8324 Vony tsy azon' afo, vary tsy hanim-pody. [Veyrières 1913 #830]
Ohabolana 8325 Vonizongo very omby : ny sisa no hatao tsara hidy. [Veyrières 1913 #6263, Cousins 1871 #3737]
Ohabolana 8326 Vonoin-Andriamanitra. [Veyrières 1913 #61]
Ohabolana 8327 Vonoy ny zanakareo raha teraka Alakaosy. [Veyrières 1913]
Ohabolana 8328 Von-tady. [Veyrières 1913 #345]
Ohabolana 8329 Vory ny teraky Hiaramy. [Veyrières 1913 #3632]
Ohabolana 8330 Vorivorin-kena iray ihany fa ny sosony no samy hafa. [Rinara 1974 #5031, Cousins 1871, Veyrières 1913]
Ohabolana 8331 Vorivorin-kena nahafahana vavoniny : lehibe, fa fohy. [Rinara 1974 #5032, Cousins 1871 #3739]
Ohabolana 8332 Vorivorin-kena : tsy ampiana, tsy analana. [Veyrières 1913 #2270]
Ohabolana 8333 Voro-damba atakalo patsa : ny iray tafiana anio, dia rovitra ; ny iray hanina anio, dia lany. [Cousins 1871 #3741]
Ohabolana 8334 Voro-damba nifehezan-drantsan-kitay : ny iray rovitra nampisento fa ny iray nampilatsa-dranomaso fa lena. [Rinara 1974 #5033]
Ohabolana 8335 Voro-damba tsy mahafa-dririnina ka enti-mitsinjaka. [Rinara 1974 #5034]
Ohabolana 8336 Voro lava soñe ka mitsengoke aloha. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8337 Voromahery miongo-bolo : ny aina be ihany, fa ny ho enti-manidina no tsy misy. [Veyrières 1913 #697, Rinara 1974 #5037, Cousins 1871]
Ohabolana 8338 Voro-mamana tsy atakalo voro-mandalo. [Samson 1965 #V95]
Ohabolana 8339 Voromanga nitera-borondolo. [Rinara 1974 #5035]
Ohabolana 8340 Vorombazaha mitety asa, ka ny tratra mangana, ny fe tapaka. [Veyrières 1913 #3783]
Ohabolana 8341 Vorombe ka no kely atody. [Rinara 1974 #5036]
Ohabolana 8342 Vorombe matim-bitsika : lehibe matin' ny kely, ka ny rano no hafanaina. [Houlder 1895 #1381, Veyrières 1913 #6056]
Ohabolana 8343 Vorome maty vady. [Veyrières 1913 #6812]
Ohabolana 8344 Vorompotsy, ka mamerina omby tsy tompony. [Houlder 1895 #1443, Veyrières 1913 #802]
Ohabolana 8345 Vorompotsy mitaingina an-kazo vokoka: ka izaho nitsirika azy no voatsiriny. [Houlder 1895 #1726]
Ohabolana 8346 Vorompotsy mitaingina ery an-kazo vokoka : jereo ny aloha, todiho ny aoriana, ndrao voafitaka avy ao an--damosina. [Veyrières 1913 #6136]
Ohabolana 8347 Vorona ambany tsy mizaha mirina. [Samson 1965 #V97]
Ohabolana 8348 Vorona ambo loha : mora taka-balavala. [Samson 1965 #V98]
Ohabolana 8349 Vorona azon-jaza : lah’ tsy maty, lasana. [Samson 1965 #V96]
Ohabolana 8350 Vorona miolakola-bohitra : na ho azo aza, manasatra. [Veyrières 1913 #3784]
Ohabolana 8351 Vorona mipetraka an-kazo borera : izaho hitany izy koa mba hitako. [Rinara 1974 #5040]
Ohabolana 8352 Vorona tokana amoron-drano, ka miherikerika irery. [Houlder 1895 #1046]
Ohabolana 8353 Vorona tsy azo mitombo bika. [Rinara 1974 #5043]
Ohabolana 8354 Voron-dolo miaraka amin’ akoho : mialà fa tsy havanay. [Samson 1965 #V99]
Ohabolana 8355 Vorondolo miseho andro, ka izay mahita mipaoka avokoa. [Veyrières 1913 #179, Rinara 1974 #5045, Cousins 1871 #3748]
Ohabolana 8356 Vorondolo mitera-boromanga ka tsara indray noho rainy. [Houlder 1895 #1895]
Ohabolana 8357 Vorondolo mitodika : atriny aby. [Samson 1965 #V100]
Ohabolana 8358 Vorondolo sa matoriandro, no tratry ny mazava vao tsy mahita lalan-kaleha. [Rinara 1974]
Ohabolana 8359 Vorondolo toetra ny reniny, ka kary fiaina ny zanany. [Rinara 1974 #5046]
Ohabolana 8360 Vorondreo milaza valalana : am--bavany izany dia izy se. [Samson 1965 #V101]
Ohabolana 8361 Voronkontsy: miambi-draha tsy an-teña. [Houlder 1895]
Ohabolana 8362 Voronkontsy nihoatr’ ala : levona ny raha tsara ratsy remby. [Samson 1965 #V103]
Ohabolana 8363 Voron-tokana an-osy, ka miherikerika irery. [Cousins 1871 #3750]
Ohabolana 8364 Voron-tsaporetika, papango didimaso : jereo aloha ny tena vao manenitra ny hafa. [Rinara 1974 #5048]
Ohabolana 8365 Vorontsiloza : tsy loza, nefa, raha alaina loza ihany. [Rinara 1974 #5049, Cousins 1871]
Ohabolana 8366 Voron-tsy rasaina tsy hita aty. [Rinara 1974 #5050]
Ohabolana 8367 Vosotra dia zary tenany. [Houlder 1895 #2195]
Ohabolana 8368 Vovoka an-kadilanana, ka ny sisa tsy lasan' ny rivotra raha ririnina, dia faohin' ny riaka raha fahavaratra. [Veyrières 1913 #3164, Houlder 1895]
Ohabolana 8369 Vovo : ka mba mitsivalana, sinibe ka mba mantsaka: lehibe ka aza mba taitra. [Veyrières 1913 #6057, Rinara 1974 #5054, Cousins 1871 #3754]
Ohabolana 8370 Vovo miara-milona sy tandroho miara-misitrika. [Houlder 1895 #1211]
Ohabolana 8371 Vovòn' alika tsy hery fa tahotra. [Cousins 1871, Houlder 1895, Nicol 1935, Rajemisa 1985]
Ohabolana 8372 Vovonana iadian' ny lohany. [Veyrières 1913 #270, Rinara 1974 #326]
Ohabolana 8373 Vovon' ny kamo : aza matory ohatra ahy. [Rinara 1974]
Ohabolana 8374 Vozon--kena, saran' ny famaky ; taovany, saran' ny mahazaka. [Veyrières 1913 #4655]
Ohabolana 8375 Za-drano toa amalona antitra. [Houlder 1895 #1948, Veyrières 1913 #6137, Rinara 1974 #5076]
Ohabolana 8376 Za-dratsin’ ny mitovo : mandany vatan’ akanga raika. [Samson 1965 #Z1]
Ohabolana 8377 Zafimintina mangery an-tahoboka ; ny tokana nandratra karazana. [Samson 1965 #Z5]
Ohabolana 8378 Zai-damban antitra, ka tsy mila izay rendrarendra, fa ny hahamafy azy ihany. [Rinara 1974 #5077]
Ohabolana 8379 Zay maty kanty. [Samson 1965 #Z15]
Ohabolana 8380 Zakan' olon-drery, zakan' olon-droa, zakan' olon-telo, zakan' olona efatra. [Veyrières 1913 #6679]
Ohabolana 8381 Zaka tsy valiana mahamena maso. [Samson 1965 #Z12]
Ohabolana 8382 Zana-balavo tsy minono amim-piso. [Samson 1965 #Z10]
Ohabolana 8383 Zana-borona foy lohataona, akohokely foy ririnina : samy fananana ka tsy azo hiangarana. [Rinara 1974 #5078]
Ohabolana 8384 Zana-dambo mamindra : tsy hery fa mihafy. [Houlder 1895 #909, Rinara 1974 #5079, Cousins 1871 #3757]
Ohabolana 8385 Zana-dambo tsy minono amin-kiva. [Samson 1965 #Z11]
Ohabolana 8386 Zanahary masina, lanitra nasian-tsira : masina ambonin’ ny masina. [Samson 1965 #Z4]
Ohabolana 8387 Zanahary ny olombelona : tsy antsonisovam-poana. [Samson 1965 #Z2]
Ohabolana 8388 Zanahary tsy mitahy ny vaka. [Samson 1965 #Z3]
Ohabolana 8389 Zanaka ampanambadiana lasan' olona, omby namidy tsy an' ny tena. [Veyrières 1913 #1250]
Ohabolana 8390 Zanaka mahaleo mahalasa. [Veyrières 1913 #4182]
Ohabolana 8391 Zanak' anabavy mandefona ivoho. [Veyrières 1913 #3188]
Ohabolana 8392 Zanak’ aomby masiaka tsy matahotra an-dreniny. [Samson 1965 #Z8]
Ohabolana 8393 Zanaka velon-kalina, ka ny am-pony hafa, ny am-poko hafa. [Houlder 1895 #1868]
Ohabolana 8394 Zanaky ny efa mangotraka tsy matahotra izay mangorovitsika. [Rinara 1974 #5088]
Ohabolana 8395 Zanaky ny mpanan-karena tsy mitafy : ny anaran--drainy sisa tafiny. [Veyrières 1913 #1014, Cousins 1871 #3762, Rinara 1974]
Ohabolana 8396 Zanaky ny mpanominda aho, ka tsy velon’ ny hitsinjo ra. [Cousins 1871 #3763]
Ohabolana 8397 Zanaky ny mpikabary ka fisa-molotra. [Rinara 1974 #5091]
Ohabolana 8398 Zana-kiva latsaka an-kady : hanihany mahavelona. [Samson 1965 #Z6]
Ohabolana 8399 Zanak' olo-mianadahy no mivady : sarotra mifanao itena! [Veyrières 1913 #68, Rinara 1974 #5083, Cousins 1871 #3758]
Ohabolana 8400 Zanak' olona tsy vadina toa soa. [Veyrières 1913]
Ohabolana 8401 Zanak' olon-tsy vadiana toa tsara tarehy. [Rinara 1974 #5084]
Ohabolana 8402 Zanak' omby manitotady : ny manam--bonjena. [Rinara 1974 #5086, Cousins 1871 #3760]
Ohabolana 8403 Zanak' ondry tao afovoan' ny amboadia, ka ampitso toa ho rava, anio toa ho velona. [Veyrières 1913 #2835]
Ohabolana 8404 Zana-mamba natelin-dreniny, ka lanin' ny kibo nitoerana. [Rinara 1974 #5092]
Ohabolana 8405 Zana-tsaka tsy mataho-totozy, zana-bibilava tsy mataho-tsahona. [Rinara 1974 #327]
Ohabolana 8406 Zana-valalana tsy hadino lanitra. [Samson 1965 #Z9]
Ohabolana 8407 Zarazarao ny raharaha : ny tapa-tanana miandry ondry, ny tapa-tongotra mitoto vary. [Cousins 1871 #3765, Nicol 1935 #24, Veyrières 1913, Rinara 1974]
Ohabolana 8408 Zato iray alinalina; arivo iray hetsihetsy. [Cousins 1871 #3766]
Ohabolana 8409 Zatovo barabara saina, ka ataon' ny sasany andefimandry. [Veyrières 1913 #1597, Cousins 1871 #3767]
Ohabolana 8410 Zatovo mandry maraina: bongo maso vao hita. [Houlder 1895 #1922, Cousins 1871 #3768]
Ohabolana 8411 Zatovo rovi--damba, isak' izay mifanena amin' olona miraoka ny ahitra ihany. [Rinara 1974 #5081]
Ohabolana 8412 Zatra manao toho-jinga ka tsy velon' ny an-kararana. [Rajemisa 1985]
Ohabolana 8413 Zatra ny miondan-tanana ka raha mionda-mololo mararin' ny sery. [Rinara 1974]
Ohabolana 8414 Zava-madinika amehezana zava-dehibe. [Veyrières 1913 #3324]
Ohabolana 8415 Zavarin’ ny fitia manan-tombo: intelo no mifampiarahaba. [Cousins 1871 #3770]
Ohabolana 8416 Zavatra amidy tsy azo tsanganan-kiady. [Rinara 1974 #5087, Cousins 1871 #3771]
Ohabolana 8417 Zava-tsy ananana mahabakabaka, hoy ilay namahana saobakaka. [Rinara 1974]
Ohabolana 8418 Zaza be loha, omen-tehina vao mitsingoloka. [Veyrières 1913 #1549, Cousins 1871 #3774, Rinara 1974]
Ohabolana 8419 Zaza diso hanta, tsy menatra ny hamingavinga. [Rinara 1974 #5090]
Ohabolana 8420 Zaza folo tsy ody trano. [Samson 1965 #Z14]
Ohabolana 8421 Zaza hariana tsy zahanam-banjankoho. [Samson 1965 #Z13]
Ohabolana 8422 Zazahova tsy enin' arahaba, ka mahatsiaro ny asa natao. [Rinara 1974 #5098, Houlder 1895]
Ohabolana 8423 Zazahova tsy enin’ arahaba : mahatsiaro ny raza-nihaviana. [Veyrières 1913 #605, Cousins 1871 #3784]
Ohabolana 8424 Zaza kamboty miaraka an' efitra, tsipoy mifamelona. [Veyrières 1913 #3189]
Ohabolana 8425 Zaza mahary tanàna. [Veyrières 1913]
Ohabolana 8426 Zaza manana tombony. [Veyrières 1913 #1015]
Ohabolana 8427 Zaza mifo-delo ka mody an-toerana amin' ny tompony. [Veyrières 1913 #2759]
Ohabolana 8428 Zaza mivalana am--pandriana : voa rainy, voa reniny. [Veyrières 1913 #1016, Cousins 1871 #3777]
Ohabolana 8429 Zaza nahatapa-damosina, notrotroana nahafola-tsandry, nefa henamaso aza tsy nozarainy. [Rinara 1974 #5099]
Ohabolana 8430 Zaza niara-nilalao izahay, antitra niara-nitanina andro, ka izay nalehany hitako avokoa. [Rinara 1974 #5095]
Ohabolana 8431 Zaza nomena ontsy ka dia mitelina. [Veyrières 1913 #1552, Rinara 1974 #5097, Cousins 1871 #3779]
Ohabolana 8432 Zaza sary. [Veyrières 1913 #1017]
Ohabolana 8433 Zaza taizan-drenibe : voky hanina fa tsy mitombo saina. [Cousins 1871 #3783, Nicol 1935 #112]
Ohabolana 8434 Zazavavy mandeha vao isa. [Veyrières 1913 #1600]
Ohabolana 8435 Zazavavy tsy endrehim-bakana : mampisalasala ny mpitazana. [Rinara 1974 #5100]
Ohabolana 8436 Zaza voky, ka tsy mahatsiaro ray aman-dreny. [Nicol 1935 #314, Cousins 1871]
Ohabolana 8437 Ze mahia zokiñi ty antitse. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8438 Ze manantsafo afake mirehareha. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8439 Ze mitsiko ro mokotse. [Poirot & Santio: Vezo]
Ohabolana 8440 Zena-dambo, zana-boantsira : 'zay tsy mahadika vatana tavela. [Samson 1965 #Z7]
Ohabolana 8441 Zinga vifotsy sy zinga voatavo, ka samy mibobobobo amin' izay azony avy. [Veyrières 1913 #871]
Ohabolana 8442 Zoky toavina tsy andriana, zandry manoa tsy andevo ; fa ifanoavana no mahamasina ny manjaka. [Veyrières 1913 #1170]
Ohabolana 8443 Zoma hianao tsy hendry, fa asabotsy vao fiharatra. [Veyrières 1913]
Ohabolana 8444 Zo maso tsy arahin-dalana; menimeny tsy vady. [Samson 1965 #Z16]
Ohabolana 8445 Zovin' ny mpiambina : mahamamy ny torimason' ny marina. [Rinara 1974 #5107]
Ohabolana 8446 Zozoro anie aho, ka tsy mba mitomany handidy toa herana na hiefitra anaty toa harefo. [Rinara 1974 #5108]
Ohabolana 8447 Zozoro iray heniheny : misaona vao tia akoralava. [Veyrières 1913 #4851, Cousins 1871 #3789]